Orinasa milina mitsivalana solika China ary mpamatsy | Higee
Ity tsipika milina famenoana ity dia ho an'ny famenoana ranon-javatra viscosity avo lenta toy ny menaka, jam sns. Ity dia tsipika famenoana tsipika, izay azo ampidirina amin'ny latabatra famahanana, milina famenoana, milina fametahana, mpanonta daty, milina fanamarihana ho tsipika iray feno.
Masinina famenoana solika famenoana solika
1. Masinina famenoana menaka mandeha ho azy
Solika, crème, jam, detergent, ary fitaovana hafa tena manjavozavo amin'ny zava-pisotro, sakafo, simika, pestiside, fitsaboana, entana ary orinasa maro hafa.
● Volavola marina: ampiharina ny rafitra Servo hahazoana antoka fa avo lenta ny habetsahan'ny famenoana.
● Haingam-pandeha azo ovaina: Ny hafainganam-pandeha hamenoana dia hihamalefaka kokoa rehefa manakaiky ny hamoahana.
● Famenoana anaty rano: hisitrika ao anaty ranoka ny famenoana ny bazazy rehefa feno mba hisorohana ny fisosohana sy ny fandroahana.
● Fanitsiana manan-tsaina: mila manova ny masontsivana eo amin'ny efijery mikasika fotsiny ianao raha te hanana habetsaky ny famenoana na fitifirana tsara aza. Ny loha famenoana rehetra dia azo ahitsy. Izy io dia manana interface interface-friendly ary tena mora ampiasaina.
● Tsy misy fandotoana: ny vatan'ny masinina dia vita amin'ny vy tsy manara-penitra 304 misy vokany manohitra manimba. Ny faritra mifandray rehetra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 316L. Ny masinina manontolo dia nasiana tombo-kase tamin'ny vy tsy misy fangarony sy vera henjana mba hisorohana ny famoahana entona maloto.
2. Masinina fanidiana miverimberina mandeha ho azy
Ity karazana masinina fanidiana ity dia ampiasaina betsaka amin'ny fametahana tavoahangy boribory, toradroa na fisaka miaraka amin'ny satroka borosy.
3. Masinina fanoratana sticker automatique
Ity karazana milina fanoratana ity dia be mpampiasa amin'ny fametahana tavoahangy boribory boribory miaraka amin'ny taratasy fametaka adhesive. Izy io dia fehezin'ny PLC ary entin'ny servo. Ny interface interface-friendly dia manamora ny fandefasana azy.
1. Ny firafitry ny marika mihodina elektromekanika tsy miankina dia mampifanaraka ny fizotran'ny fanaingoana sy ny fametahana labozia, amin'ny fanatsarana ny fahamarinan'ny fametahana.
2. Misy torolàlana momba ny masinina mampiseho ny fiovan'ny sarimihetsika misy marika ka lasa mora ny manova ny sarimihetsika.
Teo aloha: Pasteurizer & Sterilizer
Manaraka: Tsipika milina famenoana menaka ilaina
Masinina mameno solika